Maareeyaha Dahabshiil Oo Rejo Fiican Ka Muujiyay In Shaqooyinka Dib U Bilaamaan Dunida | Baligubadlemedia.com
Maareeyaha Dahabshiil Oo Rejo Fiican Ka Muujiyay In Shaqooyinka Dib U Bilaamaan Dunida
Maareeyaha Guud ee shirkadaha Dahabshiil Mudane Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale ayaa sheegay in ifafaalaha muuqda muujinayo in hab nololeedka Dunidu si dhakhso ah caadi ugu soo noqonayo oo bulshadu shaqooyinkooda iyo ganacsiga dib u bilaabi doonaan bilaha soo socda.
“Waxaan u arkaa xaaladdu in ay iska bedeli doonto sidan ay imika tahay waayo Yurub kuma sii socon karto in dadka badankooda la yidhaahdo ha shaqaynina ee guryaha jooga, waxa aan filayna oo rejaynayna in dhawrka bilood ee soo socda isbedel ka dhaco,” Sidaas ayuu yidhi Mudane Cabdirashiid Dahabshiil.
Maareeyaha Dahabshiil Group oo qayb ka ahaa barmaamij BBC-du ku eegaysay saamaynta dhaqaale ee Soomaalida uu ku leeyahay culayska Corona Virus wuxuu tilmaamay in Dahabshiil heeggan u tahay u adeegidda bulshada xaalad kastaba “Haddii aanu Dahabshiil nahay mar walba Ummadda Soomaaliyeed qurbaha ha joogaan ama dhulka Soomaalida ha joogane diyaar baanu u nahay in aanu u shaqayno,” ayuu yidhi Cabdirashiid.
Shirkadda Dahabshiil Group ayaa doorkeeda ka qaadatay xilligan dadku guryahooda ku nagaadeen, islamarkaana samaysay adeegyo u sahlaya in bulshadu iyaga oo guryahooda jooga lacag u diri karaan eheladooda, islamarkaana ay wax ku iibsan karaan.
Adeegyada Talkremit, Dahabplus, Dahabpay Portal iyo E-Dahab ayaa bulshada Soomaalida ee Qurbaha iyo kuwa gudaha joogaba u saamaxaya in ay ku diraan lacag iyaga oo isticmaalaya telefoonnadooda iyo khadka Internet-ka, islamarkaana wax kaga iibsan kara hannaanka Online-ka.
Sida oo kale adeegyada kale ee shirkadda Dahabshiil gaar ahaana xawaaladda ayaa ah kuwo u shaqaynaya sida caadiga ah iyada oo la fulinayo hannaanka loo dejiyay ka hor tagga Fayraska Corona sida kala fogaanshaha iyo tallaabooyinka kale ee lagagaga hor tagayo.